Madaxweyne Gaas oo Shir Muhiim ah u Aaday Kenya – Radio Daljir
Madaxweyne Gaas oo Shir Muhiim ah u Aaday Kenya
Oktoobar 3, 2015 6:48 b 0
Sabti, Oktoobar 03, 2015 (Daljir) —Madaxweynaha Dawlada Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wfdi balaaran oo uu hogaaminayo ayaa maanta ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee Cabdullaahi Yuusuf ee magaalada Gaalkacyo , waxaana ay ku sii jeedan dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nayroobe ee caasimadda dalkaasi.
Ka hor inta uusan madaxweynuhu ka dhoofin garoonka , waxaa uu gudaha magaalada Gaalkacyo gaar ahaan agagaarka suuqa xera dayax ka dhagax dhigay xarun cusub oo laga dhisayo boqol dukaan iyo saddex firshaan oo casri ah , waxaana fulinaya dawladda Puntland .
Sidoo kale waxaa uu madaxweyne Gaas dhagax dhigay xarumo cusub oo ay yeelanayaan Wasaaradda haweenka iyo arrimaha Qoyska Puntland iyo Hay’adda wadooyinka Puntland , dhulalkaasina waxaa ay kamid yihiin dhulalkii Dawladda ee ay dhawaan dawladda Puntland ka saartay shacabka Gaalkacyo.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in Dalka Kenya uu u aadayo sidii uu uga soo qeyb-geli lahaa shirar muhiim ah , intooda badan looga hadlayo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha Dalka .
‘’ Deeq bixiyayaasha iyo hey’addaha caalamiga ah ayaanu shir kula leenahay magaalada Nayroobi , waxaana rajeyn in shirarkaasi ku soo dhammaadaan si guul ah ‘’ Ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
Ugu dambeyn madaxweynaha ayaa guud ahaan umadda Soomaaliyeed u rajeeyey guul, horumar iyo amaan , isagoona shacabka reer Puntland kula dardaarmay inay xoojista amnigooda kana faa’iideystaan horumarka baaxadda leh ee guud ahaan Puntland ka soconaya.
DHAGAYSO: Barnaamijkii Caawa iyo Daljir iyo Wariye Cabdinasir Maxamud
Guddiga Doorashooyinka Somaliya oo Tababar loogu soo Xiray Nairobi